Budata GatherNote APK maka Android
Free Budata maka Android (33.40 MB)
GatherNote bụ ngwa ndetu nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụgharị ngwaọrụ mkpanaka gị ka ọ bụrụ ngwa nwere ike gboo mkpa ndetu gị niile.
GatherNote, ngwa ị nwere ike iji na smartphones na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, bụ ngwa emepụtara na-atụle mkpa ọrụ dị iche iche. Dị ka ọ na-adịkarị, mgbe ị na-edetu ihe na ngwaọrụ Android anyị, anyị nwere ike itinye naanị ederede na ndetu ndị a. Mana GatherNote nwere ike ime nke a site na ịgbakwunye foto na ndekọ ọdịyo. Nụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmepụta nkọwa zuru ezu na nkọwa nkọwa na ọrụ anyị.
Ihe mara mma gbasara GatherNote bụ na mgbe ị na-ese foto nke ọrụ gị, ọ na-enye gị ohere itinye akara, akụkụ, akụkụ na foto ndị ahụ. Site na GatherNote, ndetu ị na-ewe nwere ike idowe ya nusoro ahaziri ahazi. Site na mkpado, ị nwere ike hazie ndetu gị ma mee ka ha nwetakwuo ya.
GatherNote nwere ike ibubata faịlụ PDF. GatherNote bụ ezigbo akwụkwọ ndetu ihe ngwọta maka ndị na-ahụ maka ụlọ, ndị injinia, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ndị otu ọrụ nka, ndị na-eme atụmatụ obodo, ndị na-emepụta ihe na ndị ọrụ nyocha sayensị.
Nha faịlụ: 33.40 MB
Mmepụta: Magenium Solutions